“Zivisai Mambo noUmambo”
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Douala Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mingrelian Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuIndia Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
MUSI weChishanu mangwanani muna September 1922, muimba yaiitirwa gungano makanga mava kutopisa sezvo makanga mava nevanhu 8 000. Sachigaro akazivisa kuti chero ani zvake aigona hake kubuda panguva yechikamu ichi chinokosha chegungano, asi hapana aizobvumirwa kudzoka.
Pashure pechikamu chekuimba nziyo, Hama Joseph F. Rutherford vakaenda pachikuva. Vakawanda vakagara pasi vachida chaizvo kunzwa zvaizotaurwa. Vashomanana vaifamba-famba nekuti vaitadza kugadzikana nemhaka yekupisa. Mukurukuri akavakurudzira kuti vagare pasi vateerere. Pakatanga hurukuro, pane akaonawo here jira rainge rakamonwa zvakanaka riri nechepamusoro pemukurukuri?
Hama Rutherford vakakurukura musoro waiti: “Umambo hwekudenga hwava kutonga.” Kweawa nehafu inzwi ravo rine simba rakaita maungira muimba yacho sezvavaikurukura kuti vaprofita vekare vakazivisa sei vasingatyi nezveUmambo hwaiuya. Pavakasvika pachikamu chinokosha chehurukuro yacho vakabvunza kuti: “Munotenda here kuti Mambo ane mbiri akatanga kutonga?” Vateereri vakapindura vachishevedzera vachiti: “Hongu!”
“Saka dzokerai mundima, Haiwa imi vanakomana vaMwari wokumusorosoro!” vakadaro Hama Rutherford nenzwi riri pamusoro. “Tarirai, Mambo anotonga! Imi muri nhume dzake. Naizvozvo zivisai, zivisai, zivisai.”
Panguva iyoyo, jira raiva nechepamusoro rakamononoka, richiratidza mashoko ekuti: “Zivisai Mambo noUmambo.”
“Vateereri vakafara chaizvo,” akadaro Ray Bopp. Anna Gardner akati: “Vanhu vakaombera zvekuti mapuranga edenga remba yacho akaita seachazunguzika.” Fred Twarosh akati, “Vanhu vese vakabva vasimuka pamwe chete.” Evangelos Scouffas akati, “Zvaiita sekuti pane rimwe simba rakatisimudza patainge takagara uye maziso edu akati yangarara nemisodzi.”
Vakawanda vaiva pagungano iroro vakanga vagara vachitoparadzira mashoko akanaka eUmambo. Asi parizvino vakanzwa sekuti vakanga vakurudzirwa kutangazve kuparidza mashoko akanaka. Ethel Bennecoff akataura kuti Vadzidzi veBhaibheri vakaenda ‘vachishingaira uye vaine rudo mumwoyo mavo kupfuura kare.’ Odessa Tuck, uyo aiva nemakore 18 panguva iyoyo, akabva pagungano iri atsunga kupindura mubvunzo wekuti “Ndiani achatiendera?” Akati: “Ndaisaziva kuti ndaizoparidza kupi, ndaizoparidza chii uye ndaizoparidza sei. Chandaiziva ndechekuti ndaida kuita saIsaya, uyo akati: ‘Ndiri pano! Nditumei.’” (Isa. 6:8) Ralph Leffler akati, “Pazuva iri rakakurumbira ndipo pakatanga mushandirapamwe wekuzivisa Umambo wava kuitwa pasi rose mazuva ano.”
Ndosaka zvisingashamisi kuti gungano iri rakaitirwa muCedar Point, Ohio muna 1922 richiri kuyeukwa sechiitiko chinokosha chaizvo munhoroondo yesangano. George Gangas akati, “Gungano iroro rakaita kuti ndisada kupotsa kunyange gungano rimwe chete zvaro.” Haatomboyeuki achipotsa gungano. Julia Wilcox akanyora kuti: “Handikwanisi kutsanangura kufara kwandinoita pese panotaurwa nezveCedar Point 1922 mumabhuku edu. Ndinogara ndichida kutaura kuti, ‘Ndinokutendai Jehovha nekundibvumira kuvapowo pagungano iri.’”
Zvichida vakawanda vedu mazuva ano tinoyeukawo gungano rakatibaya mwoyo rikaita kuti tide kushingaira uye tide Mwari wedu naMambo waakagadza. Patinoyeuka gungano racho, tinonzwa tichidawo kutaura kuti, “Ndinokutendai Jehovha nekundibvumira kuvapowo pagungano iri.
Zvikwangwani Zvisingazivikanwi Kuti Zvairatidzika Sei
Mabhii ekuti “ADV” (mabhii ekutanga eshoko reChirungu rinoshandurwa kuti “zivisai”) akanga ari pese pese​—pamiti, pazvivako kunyange papurogiramu yegungano. Zvikwangwani zvacho zvakaita kuti vaiva pagungano vade kuziva kuti mabhii acho airevei. *
Pamadhoo nepane dzimwe nzvimbo “paiva nemakadhi machena akanyorwa nemabhii makuru uye matema kuti ADV. Takabvunza kuti mabhii aya airevei asi zvaiita sekuti hapana aiziva uye kana vaiziva vaisada kutiudza.”—​Edith Brenisen.
^ ndima 14 Mazuva ano hapana anoziva kuti zvikwangwani izvi zvairatidzika sei. Hapana kana mifananidzo yazvo yati yawanikwa nedhipatimendi rinoona nezvenhoroondo yedu.
Arthur naNellie Claus vakasvika paine nguva kuti vawane pekugara pakanaka. “Ndaiteerera zvese zvaitaurwa,” akadaro Arthur. Akangoerekana ava kunzwa mudumbu. Akabva abuda maiitirwa gungano mwoyo uchirwadza achiziva kuti aisazokwanisa kudzoka. Mumwe murindiri akamubvunza kuti: “Uri kubudirei panguva yakadai?” Asi Arthur aiziva kuti aitofanira kubuda.
Paakanga ava kudzoka, Arthur akanzwa vanhu vaiva muimba yacho vachiombera zvine mutsindo. Paaitsvaga pekumira kuti ateerere zvaiitika mukati, akawana paaikwanisa kukwira napo kuti aende padenga reimba yacho, iro raiva anenge mamita 4,8 kubva pasi. Akabva atanga kufamba akananga pane rimwe hwindo rakanga rakavhurika raiva padenga reimba yacho.
Paakapinda Arthur akaona dzimwe hama dzainge dzapererwa, dzichitarisa mukurukuri aiva nechepazasi. Dzakanga dzarayirwa kuti dzizocheka tambo dzainge dzakasunga rimwe jira uye dzaifanira kuita izvi panguva imwe chete. Asi kuti dziite izvi, paidiwa rimwe banga. Arthur aiva nebanga remuhomwe rakapinza here? Dzakafara chaizvo padzakaziva kuti aiva naro. Arthur nehama dzacho vakabva vamira panzvimbo dzavo vachimirira chiratidzo chekuti vacheke tambo. Hama Rutherford pavaizotaura kechipiri kuti “Zivisai!” vaifanira kubva vacheka tambo dzacho.
Vakaona izvi vanorondedzera kuti jira racho rakanyatsomononoka zvakanaka. Nechepakati paro paiva nemufananidzo waJesu.
Hama dzacho dzakazoudza Arthur kuti dzakanga dzashandisa manera kuti dzikwire padenga asi manera acho akabva abviswa. Dzakanga dzisingakwanisi kutsvaga munhu anodzibatsira, saka dzakanyengetera kuna Jehovha kuti atume hama ine banga. Hama idzodzo dzaiva nechokwadi chekuti Jehovha akanga apindura munyengetero wadzo nenzira inoshamisa kwazvo.
“Ndiri Kukohwa Zvibereko Zvinoita Kuti Jehovha Arumbidzwe”